Ogige Harry Potter | Akụkọ Njem
Ogige Harry Potter
Mariela Carril | | Ebe njegharị, Orlando
na ogige ntụrụndụ Ha bụ nnukwu njem nleta na ụmụaka na ọ bụghị ụmụaka. Enwere ọtụtụ ndị toro eto nwere mmasị ịbịa ebe ndị a ma megharịa njem ahụ ọtụtụ oge, naanị iji bie ndụ ole na ole n'echiche efu na egwuregwu kachasị mma n'ụwa.
Mgbe m kwuru nke kacha mma, ọ bụ eziokwu. Site na akwụkwọ na ihe nkiri mgbe niile ọhụụ ọhụrụ na-apụta ma ọzọkwa, ị ga-ahazi njem n'ihi na ọ nweghị onye chọrọ ịhapụ ya. Ndị na-eto eto nke oge a na-echeta oge ha bụ nwata na ntorobịa site n'ịgụ na ilele anya Harry Potter, ka anyị lee otú ọ dị Ekike Harry Harry Potter nke Universal.
1 Harry Potter, site na akwụkwọ akụkọ na ihe nkiri na ihe ọ bụla
2 Ogige Harry Potter
Harry Potter, site na akwụkwọ akụkọ na ihe nkiri na ihe ọ bụla
Nwanyị gbara alụkwaghịm na onye a chụpụrụ achụpụ, n'enweghị ego ọ bụla, na-anọdụ na kafe ma na-ese akụkọ akụkọ efu nke ụmụ anwansi na-eme. Ya mere anyi nwere ike ichikota na oke akuko banyere otu esi amuta otu n'ime usoro ihe omimi nke oma. Nwanyị ahụ bụ JK Na-achọ ka ọ na-erule mgbe ahụ afọ na-agba ọsọ 1997. Mgbe e mesịrị ha ga-abụ akwụkwọ asaa na saga, ọ ga - abụ nwanyị ọtụtụ ugboro nde mmadụ na akwụkwọ akụkọ ya ga - aga nnukwu ngebichi.
Warnes Bros zụtara ikike na 1999 Ya mere na-amalite njem nke ga-emekwa ka ndị na-eto eto na-egwu egwuregwu ga-egwu Harry, Hermoine na Ron. A ghaghi ikwu na otu n'ime ihe onye edemede chọrọ mgbe ị na-ere ikike bụ nke ahụ dum mgbatị isi bụ British.
N'etiti 2007, otu ụlọ ọrụ gụnyere Warner na Universal kwupụtara na ha ga-eme ogige isiokwu nke ọkachamara ọkachamara na ihe omume ya n'ime Agwaetiti Aventure, IOA. Ogige a bụ na Orlando, Florida ma sokwa na Universal Orlando Resort gbagwojuru anya nke mepere n’afọ 1999.
El leit na-akpali nke ogige a bụ nyocha, njem. Ọ bụ ya mere e ji kewaa ya na “agwaetiti” asatọ nke ọ bụla nwere isiokwu nke ya. Yabụ, taa ị nwere ike ịga leta Jurassic Park, Mpaghara Na-efu, Toon Lagoon, Skull Island, Marvel Super Hero Island, Seuss Landing, Port of Entry na Ọkachamara ofwa nke Harry Potter.
Yabụ anyị bịara n'ihe masịrị anyị: ihe Harry Potter bụ mma mmeputakwa nke Hogwarts College na Hogsmeade. Emepere ya na June 2010 ma nwee otutu ebe nlegharị anya. Enwere ọtụtụ ebe nkiri. Can nwere ike were onwe gị dịka Harry Potter na-agagharị n'okporo ámá ndị dị na London ruo mgbe ị kwụsịrị na Diagon Alley ebe ị nwere ike iri nri na Leaky Cauldron, lee ụlọ ahịa Ollivanders ma ọ bụ kwụpụ na Gringotts Bank wee biri nnukwu njem njem multidimensional.
En Okpokoro ọkụ ị nwere ike iri ụdị asụsụ bekee na ụlọ obibi London na-apụ apụ na akwụkwọ akụkọ ahụ, ụfụ ruru unyi ma yikwa ọchịchịrị. Ọ bụrụ n’ịbụ onye nwere mmasị n’akwụkwọ, ị ga-echeta na ọ bụ ebe a ka Harry nọrọ ruo oge ụfọdụ Harry Potter na onye Mkpọrọ nke Azkaban tupu ịmalite n'afọ nke atọ nke usoro ahụ. Ulo elu, ụlọ dị n'elu, na menu nke gụnyere achịcha Fisherman ma ọ bụ Toad na Oghere, n'etiti nri ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị.
Mgbe ahụ ị nwere ike ịbanye Gringotts Bank, n'okpuru dragon na uzo warawara, jee ije na marble bench wee hụ otu goblins si arụ ọrụ. Ije ije n'okporo ụzọ dị n'okpuru ala sitere na fim mana ọ na-enye aka na ahụmịhe multidimensional ị ga-ebi. You'll ga - ahụ Harry, Ron na Hermione, ndị ọjọọ si Voldemory, na ebe a na - achọ ime ka ọganiru gị bụrụ ihe mgbagwoju anya. N'ezie, ihe niile nọrọ n'oche gị.
I nwekwara ike gbagoro Hogwarts Express na ọdụ Cross nke King, na Universol Studios, Florida, ma gaa na ọdụ Hogsmeade na Universal Islands nke Adventure. Nicezọ dị mma iji malite njem ahụ! Ma obu mee njem ozo. Ahụmịhe ahụ bara uru n'ihi na site na windo ụgbọ oloko ị nwere ike ịbanye n'ime ihe ọ bụla ...
E nwekwara a igwe na-agba ọsọ, ọgụ nke Hippogriff, Na - eme ka ụgbọ elu Hagrid dị elu. Nke mbụ ị ga-agarịrị Nlekọta Ihe Ekike Ime Anwansi wee gafee ụlọ obi Hagrid ebe ọ na-enye gị ntụzịaka banyere otu esi emeso hippogriff. Mgbe ahụ ịmara, ị ga-abanye n'ụgbọ mmiri na-enweghị atụ na-atụ egwu ma tachie obi gburugburu na-agbagọ Kedu ihe ị na-eme…..
Ọzọ nhọrọ bụ ọgba tum tum njem a na-akpọ Hagrid's Magical Creatures. Nwere ike inyocha machibidoro Iwu Forest karịrị ụlọ, ofufe site na osisi na-ahụ kpokọtara e kere eke. Nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na ị daa ma ọ bụ gbuo gị site na akụ centaur ...
Ma ọ bụrụ na-amasị gị adrenaline enwere mmasị na-akpọ Harry Potter na Onye A Machibidoro Njem na simulates na broom ụgbọ elu ya na nwayi na-eto eto na ndi enyi ya. Fantasticgbọ elu dị egwu na-amalite na paseeji ụlọ akwụkwọ na ọnụ ụlọ ya a ma ama wee buruzie ikuku, na nnukwu ụlọ na ala ya. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na mgbe niile, mana enwere ọtụtụ ndị na-eche mgbe niile.
Oge ọzọ ewu ewu bụ Abalị Na-ehihie n'abalị na Hogwarts Castle. Ọ bụ agba ọkụ ọkụ na egwu banyere nnukwu ụlọ nke ọrụ ya bụ ime ememme ụlọ anọ ma ọ bụ, n'ezie, oge pụrụ nnọọ iche maka ndị niile na-agụ akụkọ ihe mere eme. Na Machị, e mere atụmatụ igosi ngosi a na 13th na 15th site na mgbede ruo mgbe ogige ahụ mechiri, mana n'ihi coronavirus ihe niile mechiri.
Na-ekwu maka ụbọchị anyị nwekwara ike ịtụ anya na n’agbata Septemba na Nọvemba ga-enwe mmasị na-akpọ Ọchịchịrị na Hogwarts Castle ebe ị ga-eche ihu Dementors, Lord Voldemort na ndị na-akwado ya. Ọ bụ egwu na ọkụ na-egosi na ọ ga-ewere ọnọdụ n'abalị ụfọdụ site na Septemba 14 ruo 15, yabụ… debanye aha ya!
N'ikpeazụ, n'ihi na oria ojoo na anyị na-ata ahụhụ ebe dị ka nke a, ogige ntụrụndụ, na-emechi na nke a bụ okwu banyere Universal. Lọ isiokwu ogige ntụrụndụ na Universal Orlando Resort ga-emechi si March 16 na March 31, maka ugbu a. Ogige ahụ na-enye akara ekwentị maka ndị niile azụrụ ngwugwu ha (877 801 9720), mana ọ bụrụ na nke a abụghị nke gị, ọ kacha mma ichere ọnwa ole na ole tupu ịzụta ha. Mkpịsị aka gafere na nke kacha mma.
N'ihe banyere tiketi enwere ọtụtụ nhọrọ: Universal Studios na Harry Potter Diagon Alley Theme Park na Transformers 3D na-akwụ ụgwọ site na $ 119, Islands nke Adventure na Harry Potter Hogsmeade na Hulk roller coaster site na $ 199 na Volcano Bay $ 80. Ọmụmaatụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Orlando » Ogige Harry Potter